Sidee looga dhigi karaa saamaynta midab-biyoodka Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | | Qalabka Naqshadeynta, Photoshop, Tricks, Tababarada
Photoshop waa aalad aad u fiican oo wax looga beddeli karo sawirradaada oo aad u siin karto taabasho farshaxan. Qoraalkan Waxaan ku barayaa talaabo talaabo ah sida loogu sameeyo saameynta midab-biyoodka ee Photoshop. Waa wax aad u fudud oo, in kasta oo ay sida ugu fiican ugu shaqeyso sawirrada, waad ku dalban kartaa nooc kasta oo sawir ah si aad u siiso taabasho hal abuur leh Tijaabi!
1 Abuur shiraac Photoshop
2 Diyaarso sawirkaaga si aad ugu beddesho midab-biyood
3 Ku mari shaandhada farshaxanka lakabka 1
4 Abuur laba lakab oo isku hagaajin ah kuna dar lakabka 1
5 Abuur maaskaro lakab cusub lakabka 1 oo sawir
6 Ku rinji midab-biyoodkaaga Photoshop
Abuur shiraac Photoshop
Aynu ku bilowno abuurista shiraac taas oo aan ku dayan doonno midab-biyoodkayaga. Guji "Fayl> cusub" ama shaashadda guriga guji badhanka "abuur cusub". Waxaan dooran doonaa dokumenti 1000 x 1000 pixel ah, qaabka midabka RGB.
Mar alla markii aad haysato u tag "filter" tab, liiska kore, oo guji "Filter gallery". Daaqad cusub ayaa furi doonta taas oo aad ka heli doonto miirayaal kala duwan oo lagu diyaariyey fayl. Tag kan galka "texture" oo dooro "texture". Qeybta saxda ah, waxaan ku habeyn doonnaa:
Iftiinka midig ee hoose
Markaad haysatid, ku dhufo "ok" waxaadna diyaarineysaa shiraacaaga.
Diyaarso sawirkaaga si aad ugu beddesho midab-biyood
Fur sawirka inaad rabto inaad ubadasho dukumenti gaar ah. Waxaan u soconaa ka saar asalka. Adeegso xulo qalabka maadada in gabadha la xusho. Markaad heysato, samee maaskaro lakab ah adigoo gujinaya calaamadda lagu muujiyey sawirka kore.
Haddii xulashadu aysan fiicnayn, ha ka welwelin, iyadoo leh saameyn biyo-biyood ma noqon doonto mid si muuqata loo dareemi karo. Inkasta oo haddii aad rabto, burushka madow iyo caddaan, aad ku rinjiyeyn karto maaskaro lakabka ah si aad u hagaajiso cilladahaas. Maaskarada mari. Markaad haysato gabadha ku jiido dukumiintiga ku yaal shiraaca. Nooca amar + T (Mac) ama ctrl + T (Windows), si aad u dhaqaaqdid oo aad u cabirto, markaa waad ku guuleysan doontaa inay la jaanqaado booska aan u qaabeynay.
Ku mari shaandhada farshaxanka lakabka 1
Lakabka 1 waxaan ku dalban doonaa miiraa. Tag tabta "Filter"> "shaashadda shaandhada", daaqadda cusub, fur galka "farshaxanka" oo guji "midabka la qasi jiray". Marka xigta, guddiga ku yaal dhinaca midig, waxaan u qaabeyn doonnaa:
Caday faahfaahin 14
Hooska xoog 0
Markaad haysato ku dhufo "ok".
Abuur laba lakab oo isku hagaajin ah kuna dar lakabka 1
Waxaan u soconaa Abuur lakab cusub oo hagaajin ahSi aad u abuurto lakabyo isku hagaajin ah waa inaad gujisaa calaamadda lagu muujiyey sawirka kore. Kiiskan, waxaan ku riixi doonnaa hue / saturation. Si aad u sameysid dejinta kaliya khuseeya daboolka hoose, Lakabka 1, nooca amar + xulasho + G (Mac) ama xakameyn + alt + G (Windows). Hadda, hoos u dhig saturation-ka - 100. Abuur a lakabka hagaajinta cusub, markan "dhalaal / isbarbar dhig" kuna dabakh lakabka kaliya 1. Iftiinka sare u qaad ugu badnaan.
Abuur maaskaro lakab cusub lakabka 1 oo sawir
Markaad heerkan gaarto, waxaad lahaan doontaa wax walba oo diyaar u ah inaad bilowdo sameynta midab-biyoodkaaga. Abuur a maaskaro lakabka cusub ee lakabka 1 iyo, burushka madow, waad ku rinjiyeyn doontaa, laakiin ma isticmaali doontid nooc kasta oo burush ah!
Tag daaqada, burush. Guddi cusub ayaa furi doona. Meelaha buraashka hoostiisa, waxaad ka heli doontaa buraashyo noocyo badan oo farshaxan ah inaad adigu awood u yeelan karto oo kaa caawin doonta inaad isku ekeysiiso garaacis iyo midabbo rinji ah. Ku ciyaar cabir ahaan, mugdi ahaan, qaab ahaan, iyo meel bannaan oo loogu talagalay noocyo badan.
Ku rinji midab-biyoodkaaga Photoshop
Markaad haysatid sawirkaaga oo madow jilicsan, oo cidhifyada xoogaa mugdi ah lehna noocyo kala duwan oo ah "istaroogyo" wax badan ama ka yar baa muuqda. Midab mari. Adeegso isla burushyada iyo isla farsamada, kaliya markan intii aad madoobi laheyd waxaad isticmaali doontaa midabbo halka aad ku rinjiyeyn lahayd maaskaro lakab ah waxaad ku rinjiyeyn doontaa lakab cusub oo aan abuuri doonno oo aan dusha saari doonno.
Si aad u abuurto lakabka, dhagsii calaamadda lagu muujiyey sawirka kore. Waxaad dooran kartaa midabka midabka aad rabto saameyntaan, waxaan kugula talinayaa inaad isku daydo midabada hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Sida loo sameeyo saameynta midab-biyoodka ee Photoshop